Panorama 360, Super Mario Run ary lalao sy fampiharana hafa amidy | Vaovao IPhone
Ny tolotra sy ny fampiroboroboana ao amin'ny App Store dia tsy mitsahatra miseho. Tsy maninona na faran'ny herinandro io, na koa alatsinainy, isan'andro dia mipoitra izy ireo fanararaotana vaovao hahazoana fampiharana sy lalao ary hitahiry euro vitsivitsy, ary manafaka azy ireo tanteraka mihitsy aza. Ary manararaotra ny zava-misy fa ny alatsinainy izao ary azo antoka fa maro aminareo no mila zavatra hampirisika anao hanomboka ny herinandro, asehonay safidy vitsivitsy amin'ireo tolotra voalohany amin'ity herinandro ity.
Aza adino fa ny tolotra sy fampiroboroboana rehetra izay ho hitanao etsy ambany dia Fotoana voafetra. avy amin'ny Vaovao IPhone Izahay dia afaka manome toky fa marina izy ireo amin'ny fotoana namoahanay ity lahatsoratra ity, na izany aza, tsy fantatray hoe rahoviana izy ireo no mifarana satria tsy manome izany fampahalalana izany matetika ny mpamorona. Noho izany, ny torohevitray dia ny hampidirinao ireo lalao sy fampiharana izay mahaliana anao faran'izay haingana, mba hahazoanao tombony amin'ny fihenam-bidy.
3 Studio Music Player | Equatorie 48 tarika ho an'ny pro's
Nanomboka tamin'ny «Rune Gems» izahay tao amin'ny fanontana Deluxe, lalao izay hanakoako betsaka amin'ny mekanikao ny mekanika, satria tsy mitahiry tsiambaratelo izany nefa mbola manohy mampiala voly hatrany, indrindra ny manamaivana ireo maty. fotoana fiandrasana ny fiara fitateram-bahoaka na mizotra amin'ny metro.
Ao amin'ny "Rune Gems", raha tokony hanangona zava-mamy dia tsy maintsy manatevin-daharana ny taila amin'ny loko mitovy ianao mba hanjavonany ary hahazo isa maro ianao. Ny mampiavaka azy iray dia ny fahaizanao mitantana haingana ny fanangonana taila, ny teboka marobe dia hahatratra anao noho ny bonus.
Rune Gems dia manana vidiny mahazatra 2,29 euro fa izao azonao atao tanteraka izao maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra.
Izahay izao dia manomboka amin'ny lalao mankany amin'ny fampiharana sary azonao atao makà sary hatramin'ny 360 degre na ivelany na an-trano amin'ny fomba tsotra.
«Panorama 360» misy a tena interface tsara ny fampiasana izany dia hahatonga ny fizotran'ny fanangonana anaty sary iray monja izay rehetra manodidina anao amin'izany fotoana marina izany dia tena mora ary koa, manararaotra ny kalitaon'ny sary atolotry ny fakantsarin'ny iPhone.
Azonao atao ny mitahiry sary panoramic ao amin'ny fampiharana Photos amin'ny fitaovanao, misy izy io mpijery fifandraisana miaraka amina fiasan'ny zoom, azonao atao ny manitsy ny fampisehoana rehefa mihodina ilay fitaovana ianao ary mazava ho azy, azonao zaraina amin'ny tambajotra sosialy ny sarin-tsarinao, amin'ny alàlan'ny mailaka….
"Panorama 360" dia manana vidiny 2,29 euro mahazatra nefa izao dia azonao ihany izany 1,09 € mandritra ny fotoana voafetra.
Studio Music Player | Equatorie 48 tarika ho an'ny pro's
Satria efa azonao atao ny mamintina ny lohateny lava, «Studio Music Player | 48 tarika mitovy ho an'ny pro »dia a mpilalao mozika Na izany aza, hahafahanao mihaino ireo hira tianao indrindra toy ny hoe manana sofina matihanina manana vahaolana avo lenta ianao.
endri-javatra preset mihoatra ny 80 mifanentana amin'ireo fitaovana misy marika malaza isan-karazany, Equalizer 48-band ahafahanao misafidy ny elanelam-potoana eo anelanelan'ny 20 sy 20.000 hertz, ary maro hafa.
Ho fanampin'izay, mpilalao mahay izy io tahirizo ny fikirana napetrakao amin'ny fitaovana iray amin'ny fomba toy izany, rehefa mampifandray azy io indray ianao dia mifidy azy io ho azy io.
Ny "Studio Music Player" dia tsy mifanaraka amin'ny mozika alaina avy amin'ny Apple Music, na izany aza, azonao atao ny mampiasa azy amin'ny mozika voatahiry ao DropBox, ary afaka mamindra mozika avy amin'ny Mac na PC anao amin'ny fampiharana amin'ny alàlan'ny asan'ny iTunes Files Sharing an'ny iTunes ianao.
Ho fanampin'izay, azonao atao ny manamboatra ny mpilalaoo amin'ny fisafidianana ireo famaranana loko telo ambin'ny folo misy, na manova ny hafainganam-pandeha playback, mamorona playlist sy maro hafa.
«Studio Music Player | 48 ny bandy equalizer ho an'ny pro »dia misy vidiny mahazatra 6,99 euro fa izao azonao atao tanteraka izao maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra.
Ary ho an'ireo mpankafy an'ity plumber ity dia mampatsiahy anao izahay fa, amin'ny fotoana fanavaozana ny lalao "Super Mario Run" farany teo, dia azonao atao izao mividy ny feno feno amin'ny antsasaky ny vidiny, amin'ny € 5,49 ihany. Raha mbola tsy nanandrana ianao dia azonao atao ny misintona azy maimaim-poana. Manana tontolo telo misy ianao ary raha tianao izany dia azonao atao ny manana azy io amin'ny fividianana tokana ao anatin'ny rindrambaiko amin'ny antsasaky ny vidiny. Tapitra amin'ny 12 Oktobra ny tolotra, koa aza lany andro fa manandrana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » fivarotana » Panorama 360, Super Mario Run ary lalao sy fampiharana hafa atolotra
Ahoana ny fakana sary JPEG amin'ny iOS 11 fa tsy ny endrika HEIF vaovao
Fitsapana hafainganam-pandeha eo anelanelan'ny iOS 11.1 beta 1 sy iOS 11.0.1